🥇 ▷ Widget Data, widget-ka si loo xakameeyo isticmaalka xogta iPhone iyo iPad ✅
Widget Data, widget-ka si loo xakameeyo isticmaalka xogta iPhone iyo iPad
Xakamee isticmaalka xogta iPhone iyo iPad ee Xarunta Ogeysiiska oo aad la isticmaasho Widget Data
Horaan u ognahay taas si loo isticmaalo aaladdayada macruufka ah waa lagama maarmaan in la yeesho xiriir internet ahDabcan, waxaa jira shirkado aan soo bandhigin xiriir xaddidan oo xog la’aan ah, taas oo mararka qaar u horseedeysa dadka isticmaala inay la socdaan isticmaalka iskuxirka internetka ee ka socda iPhone iyo iPad-ka inaysan ka badneyn xaddiga MB ee qandaraaska la siiyay. Hadda, Ayadoo la adeegsanayo dalabka Xogta Quwada, oo laga heli karo App Store, waxaa suurta gal ah in si toos ah loo xakameeyo isticmaalka xogta si toos ah Xarunta Ogeysiiska.
Waa maxay Xogta Xogta ee loogu talagalay iPhone iyo iPad?
Codsigan, Widget Data, oo loo heli karo iPhone iyo iPad leh iOS 8 ama wixii ka dambeeya Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku fulinno, hab sahlan, kormeerka dhammaystiran ee isticmaalka xog-ururinta mobilada ee aan qandaraas la galnay shirkaddeenna. Sidoo kale waa codsi fudud oo leh hawl fudud oo fudud oo cabbirkiisu yahay 3.1 MB kaliya.
Waxa ugu fiican ayaa ah in Widget Data uu la shaqeeyo dhammaan hawl wadeennada taleefanka. Maxaa, iyada oo aan loo eegaynin hawl wadeenka mobilada ee aan wadno qorshahayaga xogta, waxaa suurta gal noqon doonta suurtagalnimada in aan raadraacno isticmaalka aan ku sameyneynay xogta aan ku soo galnay Xarunta Kontoroolka ee iPhone iyo iPad iyada oo loo marayo sahlan laakiin aad waxtar u leh.
Mar haddii aan haysanno la soo degsaday oo lagu rakibay Data Widget waxaan si fudud u gali doonnaa qaar ka mid ah macluumaadka la xiriira si aan awood ugu yeelanno inaan bilowno dabagal. Xogtaas waxaan ka dhex heli karnaa:
Wadarta bilowga bilowga ee lagu bixiyay qorshaha qiimeynta ama xaddiga Megas / Gigas qandaraas lagu siiyey.
Taariikhda dib u cusboonaysiinta qorshaha xogta.
Taraafikada xogta ee horey loo cunay.
Si loogu daro xogta Widget Xarunta Ogeysiiska waxaan si fudud u furi doonnaa Xarunta Ogeysiiska ee iPhone ama iPad oo leh iOS 8, gujintan riix edit, ugu dambeyntii guji batoonka “+” ee dhinaca bidix ee dalabka. Kadib waxaan kaloo dooran karnaa meesha aan rabno inay ku taal.
Sidee Widget Data u shaqeeyaa aaladaha macruufka?
Howlgalkeedu waa mid aad u fudud, Xarunta Ogeysiinta waxaan ka heli doonnaa qeyb loogu talagalay Widget-ka kaas oo lagu muujiyey bar cagaaran, kaasoo casaan ku sameynaya waqtiga aan bilaabeynno inaan gaarno heerka qandaraas ee qorshaheenna macluumaadka. Waxay naga caawineysaa inaan ogaano goorta aan ka gudubno.
Soodejiso xogta Widget ee loogu talagalay iPhone iyo iPad
Haddii aadan haysan arjigan qalabkaaga macruufka ah, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo adeegsanaya xiriirinta tooska ah ee ka soo degsiga, kana soo degso App Store, oo aad ka heli doonto hoos.
Xogta widget ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 8.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Ingiriisiga, Shiinaha oo Fudud.